बिदेशमा पनि महिलालाई हिंसा !::Nepali News Portal from Nepal
बिदेशमा पनि महिलालाई हिंसा !
पोखरा, ११ चैत –छोटो आधुनिक पहिरन । उमेर ३० को आसपास होला । अनुहारमा पीडामा रेखाहरु कहिँकतै देखिँदैनन् । तर,उनको कथाचाहिँ बेग्लै छ । उनी आफ्नो पीडा लुकाउँछिन् र हाँसेको अभिनय गर्छिन् ।
लाहुरे बाबुकी छोरी । हङकङमा उनी जन्मिइन् । सुखसयलमै बाल्यकाल बित्यो । २० वर्षको उमेरमा उनले बिहे गरिन् । बिहे हुनु के थियो ? एउटा छोरा र छोरी जन्मे । आइडी कार्डवाला बिमलाले (नाम परिवर्तन ) ले लोग्नेलाई पनि हङकङ नै पु¥याइन् । विदेशमा काम गर्नैप¥यो । दैनिक आठघण्टा काममा घोटिन्थिन्, उनी । मनमा सपना थियो,केही गरौँ भन्ने भावना थियो अनि भविष्यको सुन्दर कल्पना पनि ।
कमाईबाट बिमलाले पोखराको बिन्ध्यवासिनी नजिकै घर घरेडी पनि जोडिन् । सासुलाई गाँउबाट ल्याएर त्यही घरमा राखिन् । त्यतिसम्म ठीकै थियो । त्यही बेला छोरा अनिषको जन्म भयो । बच्चा जन्मिएपछि बिमलालाईको काम गर्ने समय छोटियो । बच्चाको पालनपोषण र स्याहारमा समय खर्चर्नु पर्ने भयो । विदेश गए पनि श्रीमानले बाटो बिराउन थाले । श्रीमतीलाई काममा सहयोग नगर्ने, भनेको बेला घर नआउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने जस्ता दिनचर्या नै बने । एकआपसमा मनमुटाव बढ्दै गयो । उनीहरुबीच झगडा हुन थाल्यो । कमला भन्छिन् ‘बिदेशको ठाउमा मैले कसलाई भन्ने दुःख पोख्ने ठाउ थिएन हिंसा सहनु बाहेक उपाय नै थिएन ।’
ब्यस्त हङकङको एक सडकबाट भित्र गल्ली जस्तो ठाउँ छ । १० मिनेटको दूरीमा ब्यवस्थित एउटा कोलनी छ । सो कोलनीको एउटा घरमा एक महिला रोई रहेकी छिन् । उनको मुखबाट रगत बगेको छ ओठ काटिएको छ । उनीसंगै रहेको सानो बच्चा त्रसित मुद्रामा छ । त्यो रात त्रासमै बित्यो । अबेर राती रक्सीले मात्तिएको परेको कतिबेला निदाउँछ पत्तै हुदैन । भोलिपल्ट बिहान ८ बजे उठेर लोग्ने फेरि श्रीमतीलाई फकाउँछ । अनुहारमा कुनै पश्चाताप छैन । देखावटी रुपमा माफी पनि माग्छ । मनमा पीर परे पनि श्रीमतीले ‘लोग्ने नै हो, एउटा सन्तान पनि छ ’भनेर माफी दिन्छिन् । तर, अमृतको ब्यवहारमा भने परिर्वतन हुँदै भएन । केहि दिनपछि उही दिनचर्या । झगडा गर्दै मिल्दै लोग्ने स्वास्नी एक वर्षजति हङकङ बस्छन् ।
एक दिन अमृतलाई नभनी बिमला छोरा लिएर आफन्तकोमा जान्छिन अनि त्यहीँबाट बेलायत । अमृत पनि पछ्याउदै बेलायत पुग्छ । धेरै दिन खोजे पछि बिमला बसेको ठाउँ पत्ता लगाउँछ । विभिन्न बहाना बनाएर बिमलालाई खुसी र सुखी राख्ने बाचा पनि गर्छ । बिमलाको मन पग्लिन्छ । अमृत र बिमला छोराको लागि भए पनि सँगसँगै बस्न थाल्छन् । उनीरुको यसैबीचमा छोरीको जन्म हुन्छ । तर, अमृत भने सुध्रिदैन । मादक पदार्थ सेवन गरी घरमा किचलो गर्दै जान्छ । केही गर्दा पनि नसुध्रिएपछि बिमला आजित भइन् । पतिसँग सम्बन्धबिच्छेद गर्न खोजिन् ।
विदेशमा गरेको सम्बन्धबिच्छेदले नेपालमा कानुनी मान्यता नपाउने भएपछि उनी नेपाल आउँछिन् । अदालतमा गएर पतिसँग सम्बन्धबिच्छेद गर्छिन् । यस्ता धेरै महिला छन्, जो बिदेशमा पनि हिंसा सहन बाध्य छन् । रक्सीको कारण नेपालमा मात्रै होइन बिदेशमा पनि हिंसा बढिरहेको छ । हाम्रो नेपाली समाजले महिला हिंसालाई पचाई सकेको छ । जति अन्याय परे पनि महिलालाई एक्लै बस्न सहज छैन । महिलाले अन्याय सहनुको बिकल्प छैन भन्ने मानसिकता छ । ममताका र परिवार, बलाबच्चाका कारण महिलाले नै त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर महिला हिंसा गर्ने पुरुषलाई सजाय गर्ने कानून त छ तर अहिलेसम्म पनि हिंसा भएको अदालतले ठहर गरेको छैन । महिला हिंसाका मुद्दाहरु ठूलो संख्यामा पर्ने तर फैसला हुँदा हिंसा ठहर नभएको तथ्याङ्कले देखाउछ । हिंसा भएको ठहर नै गरे पनि सजाय पर्याप्त छैन । त्यसकारण न्यायालयले महिला हिंसाको कुरामा ब्यवहारिक ढंगबाट सोच्न जरुरी छ ।